स्ट्रेस भयो ? ‘ब्रेक रुम’ आउनुस्- विश्व - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २३, २०७५ नारायण खड्का
अष्ट्रेलिया — तपाईलाई स्ट्रेस भयो वा केही कुरामा तनाव सृजना भयो ? के गर्नुहुन्छ ? चुप लागेर बस्नुहुन्छ, संगीत वा एकान्तको सहारा लिनुहुन्छ अथवा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ ?
तस्बिरः एबिसी न्युज
तर अष्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न लगायतका सहरमा भने गज्जबको उपाय निकालिइएको छ । ‘ब्रेक रुम’ जानुस । जे जे सामान फुटाउन राखिएको छ । तोड्‌नुस्, फुटाउनुस् र आफुलाई हलुका बनाउनुस् ।
यो ‘ब्रेक रुम’ मा फुटाउनका लागि फर्निचर, भाँडाकुडाका साथै बोतल, पुराना टिभी, प्रिन्टर लगायतका सामानहरु राखिएको हुन्छ ।
सुरक्षित कपडा लगाएर बेस बल ब्याट लिएर उक्त कोठामा छिरेपछि तोकिएको समयभित्र ग्राहकले आफूलाई तोड्न र फुटाउन मन लागेका वस्तुहरु फुटाउन सक्छन् ।
यसले आफुमा भएको तनावलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ । यदी तनावबाट आफू पीडित नभए अरु कसैका लागि यस कामको लागि भौचर खरिद गरेर दिन सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
सिड्नी, मेलबर्न लगायतका सहरहरुमा केही समयअघि स्थापना गरिएको यो ‘ब्रेक रुम’ मा जानका लागि निश्चित रकम भने तिनुपर्ने हुन्छ ।
यसको स्थापनाकर्ताहरुले भने उक्त कोठामा जाने ग्राहकको सुरक्षाको लागि सोही अनुसारको पहिरन लगाउनुपर्ने लगायतका नियमहरु राखेका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई एक सञ्चालकले आफूहरुसँग शिक्षक, वकिल, डाक्टर, विद्यार्थी मात्र नभएर परिवार पनि साथै आउने गरेको बताएका छन् ।
उक्त कोठामा केही व्यक्तिहरु फरक अनुभवका लागि आउने गरेका भएपनि केही ग्राहकहरु आफ्नो रिस र तनावलाई कम गर्न आउने गरेको उनले अनुभव सुनाएका छन् ।
यस किसिमको ‘ब्रेक रुम’ अहिलेसम्म पर्थ, सनसाईन कोष्टमा समेत खोलिएको छ । न्यूनतम ३५ अष्ट्रेलियन डलर (करिब ३ हजार रुपैया) खर्च लाग्ने यो कोठामा धेरै ग्राहकहरु भने महिलाहरु हुने गरेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १६:४४
काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी परिसर काठमाडौंको संयुक्त टोलीले हेटौंडाबाट काठमाडौं फर्किंदै गरेका उनीहरूलाई ललितपुरको चाल्नाखेलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पक्राउ पर्ने अन्यमा कपिलवस्तु वाणगंगा घर भएका मनबहादुर श्रेष्ठ र कालिकोटको कालिका गाउँपालिका–६ का हरिचन्द्र आचार्य छन् । उनीहरूमाथि जबर्जस्ती चन्दा असुली गरेको आरोप छ ।
उनीहरू सवार गाडीमा प्रहरीले पार्टीको केन्द्रीय आर्थिक विभागको विवरण समेटिएको डायरी पनि फेला पारेको छ । डायरीमा पार्टीले करिब ७ करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएको उल्लेख रहेको प्रहरीले जनायो । उनीहरूका साथबाट चन्दा असुलीको खाली रसिद पनि फेला परेको प्रहरीको दाबी छ ।
परिसरले मंगलबारै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने म्याद लिएको छ । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध चन्दा ऐन, २०३३ अनुसार कारबाही माग राखी मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ ।
यसैबीच, बिनाकारण आफ्ना नेतालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै नेकपाले भर्त्सना गरेको छ।
महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर विश्वकर्मा लगायतलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्। उनले राजनीतिक अधिकारमाथि एक पछि अर्को गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहेको भन्दै प्रतिकार गर्न लोकतन्त्रवादी र देशभक्तहरुलाई आह्वान गरेका छन्।
नेकपाले पर्सि २५ गतेदेखि साउन २९ सम्मको विरोधका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १६:०८